Budata Uptime Robot APK maka Android
Budata Uptime Robot
Free Budata maka Android (4.60 MB)
Budata Uptime Robot,
Robot Uptime bụ ngwa ị kwesịrị ịnwe mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere weebụsaịtị ma ọ bụ sava na-enye gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ọrụ mmetụta.
Robot Uptime, ihe nkesa nkesa na ngwa nlekota saịtị nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, nwere ike ịgwa gị gbasara ọnọdụ saịtị gị yana ma sava gị na-eje ozi. Dị ka ọ na-adịkarị, mgbe saịtị ma ọ bụ ihe nkesa ị nwere kwụsịrị ije ozi nihi nsogbu ọ bụla, ị nwere ike ịghọta nsogbu a mgbe ị gara na saịtị gị ma ọ bụ lelee ihe nkesa gị. Nebe a, Robot Uptime na-arụ ọrụ a maka gị na-akpaghị aka, noge ọ bụla. Mgbe ọ chọpụtara nsogbu ọ bụla, ọ na-ezitere gị ozi site na ọwa dị iche iche. Nụzọ dị otu a, ị nwere ike ịmata nsogbu nkesa na saịtị gị ozugbo wee kpachapụ anya dị mkpa.
Mgbe Robot Uptime chọpụtara nsogbu, ọ nwere ike dọọ gị aka na ntị site na ọwa dị ka email, SMS, Twitter, Slack, HipChat. Ọrụ Robot Uptime na-akwado ụdị nlebanya dị iche iche. Site na Robot Uptime, ị nwere ike nyochaa site na HTTP, isiokwu, ping na ọdụ ụgbọ mmiri.
Robot Uptime, ọrụ awa 24, na-echebe gị pụọ na mfu ego nihi njehie nkesa.
Uptime Robot Ụdịdị